Allgedo.com » 2013 » February » 11
Home » Archive Daily February 11th, 2013
AMISOM oo lagu helay in ay Dileen Dad Shacab ah Gobolka Sh/Hoose
Baaritaan ay si wadajir ah u samaynayeen saraakiil ka socota Soomaaliya iyo Midowga Africa ayaa soo afjarey kiis baaritaankiisu socdey kaas oo ka dhacay Gobolka Shabeelada Hoose Bartamihii bishii Janaayo 2013 markaas oo ciidamada AMISOM ay ku dileen 7 qof oo shacab ah kuwaas oo 5 ka mid ah ay ahaayeen caruur. Kooxda baaritaanka ku samysey dhacadadaas oo loo xilsaarey in ay go’aan ka gaaraan, ayaa...
Xarakada Alshabaab oo sheegtay in ay sii wadayaan Dagaalada ka soconaya Soomaaliya
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inaysan marnaba joojin doonin dagaalka ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya ayna kula jiraan ciidamada AMISOM Dowladda Soomaaliya iyo maamulada dalka. Afhayeenka dhanka howlgalada ee Ururka Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in ciidamada Shabaab marwaliba ay udiyaarsan yihiin siiwadista dagaalka ay kula jiraan ciidamada...
Nabad Sugida oo soo Bandhigtey Meydka Ruux ay sheegeen inuu Diley Sarkaal ka tirsan Nabad Sugida
Saraakiisha Hay’adda Nabadsugida Gobalka Banaadir ayaa soo bandhigay meydka ruux la sheegay inuu dilay sarkaalkaan ka tirsan ciidamada Nabadsugida Gobalka Banaadir asna la dilay. Taliyaha Hay’adda Nabadsugida Gobalka Banaadir Khaliif Axmed Ereg oo warbaahinta kula hadlay xarunta Nabadsugida ayaa sheegay in meydka maanta ay soo bandhigeen uu yahay ruuxii ka dambeeyay dilkii loo geestay Sarkaal...
Raisal Wasaaraha Soomaaliya oo Cambaareeyey Qaraxii ka dhacay Gaalkacyo
Raisa lwasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa canbaareeyey qaraxii maanta (Isniin) ka dhacay magaalada Gaalkacyo kaas oo lala eegtey gawaari uu watey taliye kuxigeenka Booliska Puntland Gen.Muxyadiin Axmed Aw-musse. Raysalwasaare Saacid ayaa yiri waxaan cabaaraynayaa qaraxii Gaalkacyo ka dhacay ee masuuliyiinta lala beegsadey, “Markii aan ka shaqeyneyney...
Wararkii ugu dambeeyey Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Gaalkacyo iyo Alshabaab oo sheegtay Qaraxaasi.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug kaasi oo lala eegtay taliye ku xigeenka ciidanka Booliiska Maamulka Puntland. Qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu fuliyay ruux ismiidamiyay kaasi oo doonaye inuu khaarijo taliye ku xigeenka ciidanka Booliiska Puntland Nuuradiin. Wararka ayaa sheegaya in taliyaha uu soo gaaray...
Shirkii dhismaha Maamul u Sameynta Gobolada Jubbooyinka oo Dib u dhac uu ku yimid.
Kadib Markii Maalinimadii shalay lagu waday in Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose uu Ka furmo Shirweyne Maamul Loogu dhisayo Gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa wararka laga helayo Kismaayo waxay sheegayaan In shirkaasi uu dib u dhac ku yimid. Ergooyinkii kala duwanaa ee la filayey in ay ka qeyb galaan Shirkaasi ayaa siyaabooyin kala duwan ula hadlay Saxaafada waxa ayna sheegeen in...
Midowga Afrika oo ka hadley Qorshaha lagu doonayo in Lagu dhimo Ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya.
Iyadoo dhawaan Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ay shaaciyeen in 20% ciidanka Kenya ee ku sugan Jubbooyinka laga saarayo halkaasi ayaa arintaasi waxaa ka hadlay wakiilka Midowga Afrika ee arimaha dalka Soomaaliya. Mohamed Anadif oo ah wakiilka Midowga Afrika ee dalka Soomaaliya oo warbaahinta Muqdisho kula hadlay ayaa wuxuu sheegay inuu jiro qorshaha ku aadan in ciidanka Kenya dalka Somaaliya laga...
Ganacsatada Shidaalka Puntland oo Eedeyn u jeediyey Faroole.
Qaar kamid ah ganacsatada deeganadaa maamulka Puntland ayaa eedeen kulul dusha kaga tuuray Madaxweynaha maamulkaasi C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole. Maxamuud Cali Maxamed oo ka mid ah ganacsatada Shidaalka ka keenta dalka Yemen ee Puntland ayaa waxa uu ku eedeeyay Madaxweyne Faroole in shidaalkii uu ka joojiyay uu xilsaaray inay keenaan Shirkado heshiis wada saxiixdeen. Sidoo kale waxa uu sheegay...
Ururka Alshabaab oo la sheegay Taageero Hub ah in ay ka heleen Dalalka Iiraan iyo Yeman.
Kooxda kormeerida cunaqabateynta hubka Soomaaliya ayaa sheegay in Ururka Alshabaab ay taageero ka helaan isku xerayaal kala duwan oo xiriir la leh Yemen iyo Iran,sida ay daabacday wakaalada wararka ee Reuters. Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay gaar ahaan waaxda dabagalka ayaa sheegay inay baraayan warbixinada ku aadan taageero dowlada Iran ay siiso dagaalyahanada Alshabaab ee dhanka Yemen ka yimaada,waxaana...
Qarax geystey Khasaarooyin oo ka dhacay Magaalada Gaalkacyo.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug qarax xoogan ayaa wuxuu ka dhacay Magaaladaasi. Qaraxa oo ay warar kala duwan kasoo baxayaan ayaa waxa ay wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa mid ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari halka warar kalena ay sheegayaan inuu yahay qarax miino. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa lagu qaaday Taliye ku xigeenka ciidanka...